Cnc Lathe, Cnc Lathe Umatshini, nkqo Lathe - Lu Young
Ngqongqo High eyahlulayo ebalulekileyo
Ixesha elide lenkonzo yeplastikhi yentsimbi
Ixabiso eliphantsi nelichanekileyo
Shandong Lu Young oomatshini Co., Ltd.
Izixhobo zethu umatshini cnc iye yathunyelwa
ngaphezulu kwamazwe e-40 kwaye ufumane ingxelo elungileyo.
Uphawu 1. Ifanelekileyo ...
Uphawu 1. I-accu ephezulu ...
VMC850 Chinese 3axis nkqo cnc cnc nkqo ...
Iinkcukacha zemveliso 1. CNC ...
Ukucwangciswa okusemgangathweni 1. 3 ...
VMC420 China 3 axis cnc umshini wokugaya isinyithi
Inqaku lemveliso 1. Ukuphosa: ...
ck0640 Mini metal uhlobo gang gang isixhobo umnini ...
Iimpawu eziphambili zeCK0640 H ...
Ngokubanzi 1. Ngoku ...
ck6136 ngobuciko High tyaba ibhedi cnc ...
Izinto eziluncedo ngomatshini ku ...
ck6150 ngobuciko High station 4 cnc ma ma ...
Amanqaku 1. Indibaniselwano c ...
Ngokubanzi The bullhead pla ...
Izinto eziluncedo 1. Uyazikhethela ...
CK61100 umandlalo tyaba tyaba umatshini metal t enkulu ...
Ukusebenza kwezixhobo ...
Epreli / 09/2021
1. Zithini izinto ezidityanisiweyo? Izinto ezidityanisiweyo zingahlulahlulwa zibe zizinto ezidityanisiweyo zensimbi kunye nezentsimbi, izinto ezingezozentsimbi kunye nezenziwe ngesinyithi, izinto ezingezozentsimbi kunye nezingezizo zesinyithi. Ngokweempawu zesakhiwo, kukho ezi zinto zilandelayo zidityanisiweyo: Ifayibha c ...
NgoFebruwari / 28/2021
Ukuphuhliswa kwezixhobo zomatshini akunakwahlulwa kwiimfuno zophuhliso zeshishini lokuvelisa elizayo. Umzekelo, ukukhula kwamashishini afana namandla, ukutya, ubunjineli kwezonyango, unxibelelwano, imoto kunye noomatshini bezolimo kuya kuba nefuthe elikhulu kuphuhliso ...
Isixhobo somatshini we-CNC sisifinyezo sesixhobo somatshini wolawulo lwedijithali, esisixhobo somatshini esizenzekelayo esixhotyiswe ngenkqubo yolawulo lwenkqubo. Inkqubo yolawulo inokuqhubekeka ngokufanelekileyo ngenkqubo ngeekhowudi zolawulo okanye eminye imiyalelo yokomfuziselo, kwaye iyichaze, ukuze ...
Izixhobo zoomatshini zingena kwixesha lokufakwa kwikhompyutha kunye nobukrelekrele
Kwinkqubo yotshintsho lwedijithali, iinkampani zezixhobo zomatshini waseTshayina zijamelene notshintsho ukusuka "kwimveliso yokucinga" ukuya "kunikezelo lobunjineli" njengeyona nto iphambili yokucinga kwabo. Kule minyaka ingamashumi idlulileyo, ukhetho lwezixhobo zomatshini lwalusekwe kwiisampulu. Ukuhanjiswa kokugqibela komatshini ...